जनताको प्रश्न !
By सपनासंसार June 06, 2009
चितवन/ हाल यूएई
भौतिकवादका अनुयाईहरु भौतीक सुखको खोजीमा प्राकृतिक स्वरुपको लथालिङ्ग हेर्न चाहनु कुनै नौलो कुरा होइन । यो भौतिक उपलब्धिको घमण्ड किन ? स्वयम यो मानव स्वरुप अमर छैन भने तिमीद्वारा निर्मीत बस्तु के सधैं रहिरहला ? पुर्खाका उपलब्धी बाईसे र चौबिसे राज्यबाट एकीकरण भएको यो स्वाभिमान र स्वाधिनताको नेपाल आज जातित्वको आधारमा संघीयता भित्र्याएर फेरि हामीहरु उही युगमा फर्काउन खोज्दैछौं । हिजो पनि त संघीयता थियो । जिल्ला, अञ्चलको नाममा । त्यतिले नपुगे भौगोलिक धरातलको हिसावमा संघीयता प्रदान गर्न सकिन्छ तर एकअर्काको जातभातको नाममा संघीयता दिएर उही जातिवादलाई प्रश्रय दिने हो भने युद्धको अन्त्य कहिल्यै हुनेछैन । बिनास र बिध्वंस, हत्या र हिंसा सधैं रहिरहने छ । आजको यस सोच र बिचारलाई जनताले खै कुन हातले सलाम गरुन । आजको यो यथास्थितीपनको जड नै जातभात र छुवाछुतको प्रकोप हो भन्ने ठहर गरेर संघर्ष र अनेक क्रान्ति गर्दै हज्जारौंलाई बली चढाएर यस अमानवीय र अराजक तत्वको अन्त्य गर्न जन्मिएका हामीहरु खै कुन बाटो रोजीरहेका छौं । जनताले बुझ्न सकिराखेका छैनन् ।
समय भन्दा बलवान सायद तिमी हामी छैनौं । समयलाई रोक्न खोज्नु आफ्नो अन्त्य गर्नु नै हो जसको उदाहरण राणा शासन, राजतन्त्र र प्रजातान्त्रिक ब्यबस्था भन्दै आएका विगतका सरकारहरुले भोगेको जनताले देखेका छन् । तिमी हामीले जति भौतिकवादको प्रचार प्रसार गरे पनि प्रकृतिको नियम तोडेर एक पाईला पनि सार्न सक्दैनौं । यसको उदाहरण हाम्रो जन्म र मृत्यू हो । तिम्रो हाम्रो आगमन र अन्त्य निर्धारीत छ । यस निर्धारित समयमा यहां कयौं भौतिक सुख खोज्दै हिंडेका छन् । जनता प्रकृति प्रेमी हुन् । यस बेमेल संरचना नै आजको यस दुखान्त क्षण हो ।
राणा आए, राजा आए, त्यस पछि अनेकौं सरकार आए तर गए । यी भौतिक बस्तुहरु आउंछन् र जान्छन् । यहि परिर्वतन हो । यहि सत्यता हो । आजका अगुवाहरु कसका लागि र केका लागि आए जनताले बुझ्न सकेका छैनन् । खारा, बारा, कपिलबस्तु हुंदै आज राजपुर बासी उहि र उस्तै मारमा रोइरहेका छन् । हिजो खाली खुट्टा काठमाण्डौ छिर्ने नेताहरु आज विदेशमा व्यापार व्यबसाय चालएर, पजेरोमा चढ्दै महलमा आसिन छन् । गरिव निमुखा अनपढ जनता सधैं चोट, पीडा, दुःख, दर्द र आंशु आंशुमा डुबिरहेकाछन् । कांग्रेसले क्रान्ति गर, एमाले गर, या माओवादी र फोरमले गर जसले जे जे गरे पनि मर्ने र भोग्ने गरिव नेपाली जनताले नै हो । अगुवाहरु त भारतमा बस्दै, बैंकक घुम्दै, लण्डनमा स्वास्थ्य शिविर खडा गर्छन् । यी भौतिक बस्तुहरुले पनि त हामी जनताका अगाडि प्रमाण स्वरुप साक्षि बकिरहेका छन् नि ।
आजका अगुवाहरु कोही अध्यात्मिक नाममा जनतालाई मूर्ति र ढुङ्गा पुज्न लगाएर, पूजापाठ धर्मकर्मको नाममा पैसा र धन चढाउंन लगाउंदै अदृष्य रुपमा त्यहि जनताको पसिना र रगत चुसेर जनता माथि राज गरिरहेका छन् । अर्का थरिहरु भौतिकवादको वकालत गदै भौतिक सुखको खोजीमा भौतारिरहेकाछन् । जसको प्राप्तीको लागि जुन सुकै मूल्यका प्राकृतिक धरोहरहरु अरुलाई प्रदान गर्न तत्पर छन् । यी दुवै थरि आज नेपाल आमा र नेपालीको लागि अभिषाप बनेर उभिएका छन् र यसैले यहां आजसम्म शान्ति र अमन चयन छाउन सकेन । कठ्ठै ती हज्जारौं शहीदका लाखौं टुहुरा छोराछोरी, ती बिधवा नारी र सहारा बिहीन बाबु आमा आज ती गाउंघरमा भोकै र नाङ्गै रोग र शोकमा रोइरहेका छन् । अकाल मृत्यु पर्खिरहेका छन् ।
हिजोको युगमा अनपढ र अशिक्षित नेपाली भए पनि जवान लोग्ने मान्छेको के कुरा, बच्चा, आईमाईमान्छे र सत्तरी बर्षका अमर सिंह थापा स्वयम साम्राज्यवादीहरुसंग लडेर आफ्नो देशको सीमा र ईज्यतको रक्षार्थ आफ्नो प्राणको आहूति दिएका थिए तर आज हरेक दिन हरेक ठाउंमा सीमा मिचिएको छ । तिनै शत्रुहरुले हाम्रै जन्मदाता आमा, दिदीबैनीहरुलाई दिउंसै नङ्गागाएर देह लुटिरहेका छन् । घरमा बाबु, दाजुभाइ, छोरा र लोग्ने भनाउंदाहरु हुंदा पनि बलात्कृत हुनु परिहरहेको छ । हामी नामर्दहरुले यस्ता दृष्य एक पटक होइन धेरै पटक आफ्नै आंखाले हेरिरहेका छौं । अनेक भाषण र नारा टिभी र रेडीयोमा घन्काएर पत्रिकामा बक्तव्य निकालेर यस्ता घटनालाई छोप्ने गर्छौ । लाज र घिन पचे पछि यहां जे गरे पनि हुंदो रैछ । आमा, दिदीबैनी, भाउजू बुहारी र आफ्नै श्रीमतीहरुलाई अर्काले नङ्गाएर बलत्कार गर्दै आफ्नै घरबाट निकाल्दा र धपाउंदासम्म पनि हामी मौन बसिरहेका छौं । हेरीरहेका छौं । यसको अर्थ आज नेपालमा नेपाली आमाका सन्तान रहेन छन् । कुनै सुपुत्र रहेनछन् । यदि रहेछन् भने ती नामर्द, हिंजडा र नपुंसकहरुमात्र रहेछन् । यसैले त सधै कुर्शिको लागि सत्ता र भत्ताको लागि लडिरहेछन् । यो प्रकृति स्वरुप आत्मा मार्दै भौतिक सुखको खोजीमा आमा दिदीबैनीहरुलाई बेचिरहेका छन् । कहिले बारा पर्शामा, कहिले कपिलबस्तुमा, कहिले सुस्तामा त आज आएर राजपुरमा । राजपुर वासी नेपालीहरुको यस्तो दयनीय र दर्दनाक अवस्थामा साथ दिन छाडेर हातेमालो नगरेर नेपाली युवा भनाउंदा युथफोर्स, वाईसिएल र तरुण दलका नाममा रहेका युवा जत्था आज कहां के गरिरहेका छन् ? क्यासिनोमा भएको भए एकअर्कासंग लड्ने र भिड्ने थिए ।
धन्य छ तिमी भौतिकवादी र आध्यात्मिकवादी भनेर जनतालाई झुक्याउनेहरु, प्रकृति स्वरुपको यो दया माया, प्रेम र विश्वास लिन र दिन सक्ने यो अन्तरआत्मामा चिहाएर हेर आज अनपढ र निमुखा नेपाली जनताले सबै पार्टीहरुलाई, नेपाली बुद्धिजिवीहरुलाई, सम्पूर्ण देशविदेशका नेपाली र स्वयम मलाई पनि सोधिरहेछन्, के तिमी नेपाल आमाकै सन्तान हौ ?
बसन्तको कलम बिचार बिवेचना
Labels: बसन्तको कलम बिचार बिवेचना
Anonymous 6/7/09, 9:43 AM
Thanks for your great view,i will want to see more than more like it. your kamala UK
suman 6/7/09, 10:12 AM